Monday November 11, 2019 - 15:54:57 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxayo qaraxyo ciidamada AMISOM iyo maleeshiyaadka dowaladda Federaalka Soomaaliya lagula beegsaday deegaanno katirsan Sh/Hoose.
Qarax xooggan oo maanta barqadii ka dhacay deegaanka KM13 ee duleedka magaalada Muqdisho ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo katirsan dowladda.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in qaraxa waxyeello xooggan ay kasoo gaartay laba gaari Tikiniko ah oo ay wateen ciidamada labeegsaday, ugu yaraan hal askari ayaa la xaqiijiyay in uu dhaawac kasoo gaaray qaraxa ka dhacay KM13.
Dhinaca kale qarax ka dhacay wadada xiriirisa deegaanka Golweyn iyo degmada Buula Mareer ayaa khasaara lagu gaarsiiyay ciidamada shisheeye, war kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in qaraxa lagu dilay sarkaal miina Baare Yugaandheys ah iyo askari katirsan ciidanka dowladda.
Wararka ayaa intaas ku daraya in qaraxu uu haleelay ciidamo lugeynayay oo ku socdaalayay inta udhaxaysa degmada Buula Mareer iyo deegaanka Golweyn, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dhanka taliska ciidamada AMISOM oo ku saabsan qaraxii maanta lagula beegsaday Sh/Hoose.